“Ma nihin kuwo tabar-darran la’aanta Neymar Jr” – Dani Alves – Gool FM
(Brazil) 17 Juuunyo 2019. Xiddiga kooxda Paris Saint-Germain ee Dani Alves ayaa sheegay in xulka qaranka Brazil uusan aheyn mid daciif ah sababa la xiriira la’aanta Neymar Jr.
Dani Alves ayaa dhinaca kale Tilmaamay in xulka qaranka Samba uu u dagaalami doono sida uu ugu guuleysan lahaa tartanka Copa America.
Brazil ayaa sanadkan martigalineysa tartanka Copa America, wuxuuna ilaa iyo haatan xulka qaranka Samba yahay musharaxa ugu xoogan ee ku guuleysan kara tartankan.
Laakiin kaddib markii uu Neymar Jr soo gaaray dhaawac, isla markaana la xaqiijiyay inuu seegayo tartankan, shaqsiyaad qaar ayaa waxay bilaabeen inay shaki galiyaan arinta ku saabsan in xulka Brazil uu ku guuleysan doono koobka.
Hadaba Dani Alves ayaa wareysi uu bixiyay sida laga soo xigtay shabakada “Goal” ayaa wuxuu ku sheegay:
“Waxaan u maleynayaa in mar kasta aan u nimaadno xulka qaran isla markaana aan xirano maaliyadan, waa inaan muujinaa inaan nahay kooxda ugu xoogan, iyadoo aan loo eegin haddii uu Neymar joogo ama hadii kale”.
“Waa inaan taas cadeynaa sababtoo ah waxaan mataleynaa koox taariikh ahaan la ixtiraamo, lakiin xaqiiqdii haddii aan heysano ciyaaryahan sida Neymar oo kale ah, waxaad noqoneysaa mid xoogaa xoogan, laakiin ma noqon doontid daciif isaga la’aantiis, waxaadna kordhin doontaa tayadaada iyo awoodaada, balse ma dareemi doontid hoos u dhac isaga la’aantiis”.
“Mas’uuliyada ina saaran wali waa sida ay horey u ahayd, waxaan tusaale u nahay taariikhda, waana inaan u difaacnaa taariikhdan si sharaf leh ee aad u weyn”.
Waxaa xusid mudan in xulka qaranka Brazil uu la ciyaari doono dhigooda Venezuela Arbacada soo aadan, kulankooda 2-aad Group A ee Copa America, iyadoo Group-kan ay hogaaminayaan wiilasha Samba, kaddib guushii ay ka gaareen 3-0 kulankoodii furitaanka tartankan Bolivia.